Mpanamboatra sy mpamatsy manapaka
Magnetic Shuttering Profile System dia fampifangaroana andriamby sy lasitra vy. Raha ny mahazatra dia azo ampiasaina amin'ny fikirakirana ny robot na ny fiasan'ny tanana.
Magnetsera fanapahana 1800KG miaraka amin'ny bokotra on / off ho an'ny rafitra fanamboarana trano efa vita mialoha
1800KG Shuttering Magnet dia andriamby boaty mahazatra hanamboarana bobongolo mialoha amin'ny famokarana beton. Noho ny andriamby neodymium mahery tsy fahita eto an-tany dia afaka mitazona mafy ny bobongolo eo ambony latabatra izy. Ampiasaina be amin'ny famolavolana vy na bobongolo vita amin'ny plywood izy io.
450Kg karazana boaty andriamby dia haben'ny rafitra andriamby ho an'ny fametrahana ny sidemold amin'ny latabatra beton teo aloha. Izy io dia namokatra tontonana vita amin'ny beton mialoha ho 30mm hatramin'ny 50mm hateviny.